संघीयताभित्रको भ्रम र स्मार्ट पोखरा - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ३१ गते ९:४८
नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ होइन । विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, इलाका, गाविस, वडा हुँदै बस्ती स्तरसम्मको संरचना हामीले भोगेर आइसकेका छौं । त्यसो भए स्वायत्तता नयाँ हो ? त्यो पनि होइन । २०५५ सालमै स्वायत्त शासन ऐनमार्फत हामीले स्वायत्तताको अभ्यास पनि गरिसकेका छौं । यसको मतलब जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति उतिबेलै स्वायत्त निकाय थिए । त्यसो भए नयाँचाहिँ के हो त ? पहिले स्थानीय निकाय थिए, अहिले स्थानीय सरकार बनेको छ । निकाय र तह धेरै फरक कुरा हो । निकाय राज्यको एउटा संयन्त्र हो भने तहचाहिँ आफंैमा सरकार हो । यो पूर्णत स्वायत्त हुन्छ तर स्वतन्त्र होइन । सरकार बन्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । हाम्रो संघीयताको नयाँ मोडल नै तीन तहको सरकार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीनवटै तहमा आफ्नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छन्, हुनुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार स्तरीय र पर्याप्त हुन् । सडक संरचनाहरु गाउँगाउँमा पु¥याउँ । सबै जनतालाई सुखी बनाउँ ।’ सोच अनुसारको कार्यक्रम र योजना चाहिँ बनाउँदैनौं हामी । समस्या यहीँनेर छ । निर्वाचित भएपछि आफूलाई ठालु ठान्ने परम्परा जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो संघीयता कार्यान्वयनका लागि । जनताले प्रतिनिधि छानेका हुन् भन्ने नै बिर्सिन्छौं हामी, सत्तामा पुगेपछि । संविधानले स्थानीय स्तरमा सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न र विकासको स्वाद चखाउनसंघीयताको परिकल्पना ग¥यो । यसमा हामी सबै जानकार छौं । सरकार चलाउने विधिबारे जानकार भएनौं ।
आउनुस्, अलिकति पोखरालाई सुझाव दिऊँ । महानगरमा चुनाव जित्ने, हार्ने सबैको साझा नारा थियो–‘स्मार्ट सिटी ।’ सम्भवतः यो शब्द जनप्रतिनिधिको हुँदै होइन । केही अलि धेरै पढेका, विदेश डुलेका र सामाजिक सञ्जालमा पोख्त मानिसहरुको शब्द हो, जो चुनावमा नेताहरुको सहयोगी भएर पर्दा पछाडि थिए । धेरै भोट बटुल्न र चुनाव जित्न निर्धक्क साथ भयंकर दुरुपयोग ग¥यौं, यो शब्दको । यदी जनप्रतिनिधिहरु स्मार्ट सिटी नै बनाउन चाहन्थे भने खै त सुरुवात भएको ? ट्युबलाइटवाला होर्डिङ बोर्ड, विदेशी ढुंगा र मार्वल टाँसिएका सडक पेटी, चौतारा र पोखरी मासेर विस्तार गरिएका कच्ची सडक, चोकको माटो ताछेर घटाइएको आइल्यान्ड, खरका छाना भएका प्रतीक्षालय फालेर स्टिल र फलामले बनेका प्रतीक्षालय, चोकचोकमा राखिएका फलामे डोम, यसैलाई हेरेर भनौं पोखरालाई स्मार्ट सिटी ? स्मार्टको मापदण्ड के हो ? सडक चक्ल्याउन रुख काटेर, घरघरै विदेशी मार्वल टाँसेर, थोत्रा गाडीमा भाडा तिर्ने कार्ड देखाएर पोखरा स्मार्ट बन्दैन । स्मार्ट भनेको स्वच्छ वातावरणमा कसैको दवाव विना उच्चतम सेवा प्राप्त गर्नु हो ।
जनप्रतिनिधिलाई मेरो विनम्र आग्रह–कृपया स्मार्टको भ्रम छरेर पोखरालाई नबिगारिदिनुस् । ‘पहिला सेवा त्यसपछि सुविधा’ गणतन्त्रको मुलमन्त्र नै यही हो । तर त्यसको ठीक उल्टो चलिरहेको छ, ‘पहिले आफ्नो सुविधा, त्यसपछि पनि आफ्नै सुविधा ।’ जनताको सेवा चाहिँ जनप्रतिनिधिले बिर्सिसके । घरमा बसेर सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, निर्धक्कसँग व्यापार ब्यवसाय गर्ने वातावरण बनोस्, सडकका कारण दुर्घटना कहिलै नहोस्, घरबाट बाहिर निस्किएपछि स्वच्छ वातावरणमा हिँड्न पाइयोस्, विश्वलाई डाहा लागोस्, पोखरा देखेर । यो ठूलो काम होइन तर नगरी नहुने काम हो । संघीयताको दीर्घायूको कामना । जय नेपाल !!
गुरुङ कांग्रेस नेतृ हुन्